Tuesday March 17, 2020 - 16:30:17 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Ciidamada Booliska Xukuumadda dabadhilifka Masar ayaa dad shacab ah ku xasuuqay gobolka jaziirad u ekaha Saynaa oo ay ka socdaan qulqulatooyin sababay dhimashada kumanaan kun oo qof.
Wararka ka imaanaya magaalada Bi'ril Cabdi ee dhacda waqooyiga gobolka Saynaa ayaa sheegaya in halkaas lagu toogtay ugu yaraan 6 qof oo shacab ah kuwaas oo kamid ahaa dadka deegaanka ee diiday in ay wadashaqeyn layeeshaan ciidamada sirdoonka Masaarida.
War qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Alsiisi ayaa lagu sheegay in lixda qof ee ladilay ay ahaayeen kuwa hubeysan oo iska hor'imaad lagalay ciidamada ammaanka, dadka deegaanka oo ka jawaabayay sheegashada dowladda ayaa ku sifeeyay fal dambiyeed marmarsiimo loo yeelayo.
waxaa la sheegay in lixda qof ee lagu dilay magaalada Bi'ril Cabdi lagalasoo baxay guryahooda ladibna ay si bareer ah utoogteen ciidamada booliska ee sida melleteriga utababaray, telefeshinka ku hadla afka dowladda melleteriga alsiisi ayaa baahiyay meydadka dhalinyarada ladilay oo dhulka daadsan isagoo ku sifaynayay argagaxiso ay toogteen ciidamada ammaanka.
Gobolka jaziirad u ekaha Saynaa waxaa bil walba ka dhacay gabood fallo ay geystaan ciidamada xukuumadda faasidada ah ee alsiisi, warbixinno la aruuriyay ayaa sheegaya in maamulayaasha Masar ay qaateen go'aan ah in ladilo dhammaan dadka iska diida in ay jawaasiis unoqdaan sirdoonka xukuumadda Alqaahira.